Soo-saareyaasha Kalkaalinta Caafimaadka | Shiinaha Kalkaalinta Warshad & Shirkado
Dhammaan iibka 'IV Cannula' oo leh Port Cirbad
Kateetarka xididka gala (IV cannula ama periheera venous catheter) waa tuubbo (tuubbo yar oo dabacsan) oo la galiyo xididka durugsan (badiyaa cududda cududda ama lugta) si loo siiyo daawo ama dheecaanno. Marka la galiyo, khadka ayaa loo isticmaali karaa in dhiig lagu soo qaado.
Warshadda Qiimaha silikoonka Foley Kateetarka 3 dariiqo
Kateetarka Foley waa tuubo kaadiheyste ah oo kujirta. Waxaa loogu magac daray Frederic Foley, dhakhtarka qalliinka ee markii ugu horeysay naqshadeeyay kateetarka, Foley waa tuubbo godan, jilicsan oo la geliyo kaadi heysta kaadi mareenka. Bukaannada aan awoodin inay faaruqiyaan kaadiheysta sababo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin suuxdin inta lagu jiro qalliinka ama dhibaato kaadi haysta lafteeda, tuubada foley ayaa u oggolaaneysa kaadi inay si joogto ah u soo daadato.